BARABOOM! Culver စီးတီးတွင်စတူဒီယိုများစတင် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BARABOOM! Culver စီးတီးရှိစတူဒီယိုမိတ်ဆက်
BARABOOM! Culver စီးတီးရှိစတူဒီယိုမိတ်ဆက် - "ကျနော်တို့ကသူတို့သတ်မှတ်ချက်အပေါ်ရောက်လာသို့မဟုတ်စျေးကြီး Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာရှေ့တော်၌စိတ်ကူးများစမ်းသပ်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း tools များကိုပေး။ " ဒီ Impossible သည် ...
ယခင်: အဆိုပါ Hobbit များအတွက် Dolby Atmos: DVS နဲ့ Park လမ်းမကြီးနှင့်အတူ Smaug ၏တတ်သောပျက်စီးရာ ...
နောက်တစ်ခု: 4K အဆိုပါ 8 နေဖြင့်လာမည့်နှစ်တွင်နှင့်စမ်းသပ် 2016K ထုတ်လွှင့်စတင်နိုင်ရန်တစ်ဦးကအစီအစဉ်ကို ...